Obbo Leencoo Lataa: ''Akka jaarsa tokkootti warra dardara gorsina'' - BBC News Afaan Oromoo
Jilli Adda Dimookiraatawaa Oromoo (ADO) Obbo Leencoo Lataan hogganamu ganama kana Finfinnee galan.
Hogganaan jila kanaa Obbo Leencoo Lataa waan jedhan, ''Karaa dimookiraatawaa tahen qabsaa'uuf qophiidha. Haala isaa ilaallee filannoo dhufuurratti dorgomuu dandeenya,'' jedhaniiru.
Ibsa dhaabilee midiyaaf kennaniin Dr. Diimaa Noggoo, Itti Aanaa ADO erga filannoo karaa nagaa qabsaa'uu filatanii booda yaalii biyyatti deebiyanii qabsaa'uu taasisaa turan haala yeroo ammaa biyya keessatti ta'aa jiruun milkaa'ee akka dhufan ibsan.
Akka dhaaba siyaasaa tokkootti...ykn.. warra jiran waliin...
Adeemsa itti aanu maal akka fakkaatu yeroo ibsan filannoo lama lafa kaa'an Dr. Diimaan. Tokkoffaa, akka dhaaba siyaasaa tokkootti biyya keessatti seera qabeessaa tokkootti galmaa'anii hojjechuu, lammaffaan ammoo dhaabbileen siyaasaa jiran waliin walitti makamanii hojjechuudha. Kana gochuudhaaf garuu haal jiru ilaallee murteessinas jedhaniiru.
Uummanni waggottan sadan darban dimokiraasii, walqixxummaafi haqaaf qabsaa'aa akka ibsuun jalqaburraa yeroo Adda Bilisummaa Oromoorraa kaasanii sirni federaalizimii akka ijaaramu warra ga'ee gumaachaa turan ta'uu dubbatan.
"Federaashiiin amma jiru kun akka dimokiraatawaa ta'udha..."
Biyyi sabaafi sab-lammii hedduu qabdu akkasii kun sirna gubbaa hanga dakaatti tokko ta'een buluu waan hin dandeenyeef sirna federaalzimiin barbaachisaa ta'uu ejjennoo cimsanii qaban akka ta'e dubbatan Dr. Diimaan.
"ADO'n jalqaba gaafa hundeeffamu sirna kana attamiin dimokiraatessuun danda'ama kaayyoo jedhu qabateeti. Federaalizimiin dimokiraatawaa ta'uu baannaan jiraachuu hin danda'u.
Obbo Leencoo Lataa attamiin akka hirmaatan gara fuula duraatti qoratanii akka murteessan dubbatanii, isaan booda gara karoora hojii baafachuutti darbu. "Fedhi keenya garuu ifadha. Federaashiiin amma jiru kun akka dimokiraatawaa ta'udha."
Jilli Adda Dimookiraatawaa Oromoo (ADO) biyyatti gale torban lamaaf akka turullee ibsaniiru.
Jila ADO kana gorsaan dhimmoota nageenyaa biyyaalessaa ministira muummee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa fi hogganaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa, Obbo Ahmad Shidee buufata xiyyaaraa Booleetti simataniiru.
Obbo Abbaa Duulaan dubbii dubbataniin, dhaabbati ADO dursa fudhachuun karaa nagaan qabsaa'uuf biyya galuu isaatti galateeffachuu barbaanna jedhaniiru.
Pirezidantiin Adda Dimookiraatawaa Oromoo (ADO) Obbo Leencoo Lataa durumaa biyyatti seenuuf qophiirra turuu isaanii BBC'tti himaniiru.
''Akka nama jaarsa tokkootti taa'een warra dardara gorsuu mala kennuufi isuma fedhiinkoo akka nama tokkootti.''
Obbo Abbaa Duulaan gama isaaniitin, waamichi ADO qofaan akka hin dhaabanne abdii qabu.
''Kan biraatis karaa kana hordofuudhaan biyyatti galuudhaan qabsaa'uu danda'u. Ammaan booda garaagarummaan ilaalchaa diinummaa biyyattii ta'u dhaabbachuu qaba,'' Jedhan.
Har'a warri galan kunneen siyaasa biyya kanaa keessatti warra adda durummaan beekamanidhas jedhaniiru.
Isa paartileen mormituu waa'ee seera shorokeessummaa haa ka'u jedhanii kaasan irratti mootummaan hagam qophiidha jedhamani isa gaafatamanif Abbaa Duulaan mariidhaan waan hiikamu qabudha jedhan.
Hoggantoonni dhaaba Adda Dimookiraatawaa Oromoo (ADO) gameeyyiin mariif biyyatti galan kunneen hoggantoota duraanii dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) turan.
Miseensonni jila har'a Finfinnee gahan dura taa'aa dhaabichaa Obbo Lencoo Lataa, Dr. Diimaa Noggoo, Leencoo Baatii, Dr. Bayaan Asoobaa fi Dr. Hasan Huseenidha.
Dhimmi marii maali?
Addi Dimookiraatawaa Oromoo (ADO) torban muraasa dura dhaaba naannoo Oromiyaa bulchaa jiruun affeerraa taasifame hordofee biyyatti galuu akka fedhu ibsa baasee ture.
Akkaatuma kanaan Caamsaa 11 fi 12 mootummaa Itoophiyaa waliin marsaa duraa mari'achuu isaa dhaabichis mootummaanis beeksisani turan.
Gorsaan dhimmoota nageenyaa biyyaalessaa ministira muummee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Wanti guddaa karaa mootummaadhaan dhiyaachaa tureefi dhihaatu karaa nagaan qabsaa'uu qofaadha jedhan.
Gama ADO'nis mootummaan haala akka mijeessuu marii dhiheenyaan waliigalamee jira. Haata'u malee, wanti hafu jira jechuun dubbatu.
''Wanti hafan garuu, waan baay'eetu jiru. Wanti ta'u qabu jedhani kaasani baay'eetu jira. Seera biyyaa waliin wanti walsimuu qabu waan baay'eetu jira. Kunis, ammaan booda marii taasifamu keessatti waan hiikamudha.
''Ani akkan ilaalutti wanti hafani waan xiqqaafi waan hiikamaa deemanidha jedheen amana. Innimmoo har'a irraa kaasee guyyaa dhufan keessa marii godhamuun waan karaa qabachaa deemanidha.''
Pirezidantiin Adda Dimookiraatawaa Oromoo (ADO) Obbo Leencoo Lataa illee dubbii dubbatanin haasaan kanaan dura taasifamaa ture marii kana mijeessuudha jedhan. Isaanillee waan hafu jiraachuu himu.
''Waa'ee polotikaa jajjabaa ammaan booda haasofna. Nuti wanta hundaafuu qophiidha. Seenaatti yeroo dabarsuun hin barbaachisu.''
Amooniyem naayitreetiin dhohiinsa Beeyiruut uume akkamiin achitti kuufame?